Tag: emeghe udu | Martech Zone
Tag: emeghe udu
Email na-aga n'ihu na-eduzi ịzụlite ma na-ejigide usoro nke azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị. Ọ bụ ọnụ, ọ dị mfe itinye ya, ọ bụ atụ, ma ọ dị irè. Agbanyeghị, ọ bụrụ na otu dị iche iche na-eji usoro a eme ihe, ọ ga-enwe mmetụta. Achọghị spam na-enweghị nchịkwa na ọtụtụ azụmaahịa na-aga n'ihu na-emebi usoro ọrụ nke ndị na-enye email na ndepụta mbubata. Site na nke a, ha na-eweda aha email nke azụmahịa ha na ozi ịntanetị na ịbanye, ndị debanyere aha bara uru
Ebe m si na IRCE lọta na Chicago, enweghị m ike ịchịkọta ọnụọgụ teknụzụ nke mepụtara iji mata nke ọma ma kpọtụrụ ndị ahịa ebe ha nọ na ndụ ndị ahịa. Anyị ga-enwe ọtụtụ ọkwa na izu ndị na-abịanụ na ụfọdụ ndị isi na ndị ọhụụ na mpaghara a. Ọ bụ oké ihe omume nke ukwuu lekwasịrị anya na-amụba ahịa, conversions na ndị ahịa uru site kachasị nkwurịta okwu ebe